Led Work Light Tripod, 150 Watt Equivalent Bed Bulb, Ọrụ Mgbapụta Emeputa na China
Nkọwa:Led Ọrụ Light Tripod,150 Watt Kwesịrị Ekwesị Bb Bulb,Ọfụma ọrụ, Na-arụ ọrụ ìhè,,
Home > Ngwaahịa > Ibu Ọrụ > Okpomiri Okpomiri Uhie
Ngwaahịa nke Okpomiri Okpomiri Uhie , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Led Ọrụ Light Tripod , 150 Watt Kwesịrị Ekwesị Bb Bulb suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ọfụma ọrụ R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
120W Rụọ ọrụ bọtịnụ ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
120W LED Nwa oge Ọrụ Light 5000K 15600Lm  Kpọtụrụ ugbu a
120W n'èzí n'èzí n'èzí ìhè Lightodod  Kpọtụrụ ugbu a
Ọrụ 80W na-arụ ọrụ ọrụ na-eme ka ndị njem na-aga  Kpọtụrụ ugbu a
100W Ọhụụ na-arụ ọrụ n'èzí na Nkwụnye  Kpọtụrụ ugbu a
150W Na-arụ ọrụ Ụdị Ntugharị 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
120W Rụọ ọrụ bọtịnụ ọkụ <Ọdịdị Pụrụ iche Durable> : Nke a bụ 120W eduzi ihe eji eme ihe ntanye ngwa ngwa bu ihe di mfe ma di mfe ibughari na oru di iche. Igodo mkpọchi kuki na n'elu maka nghọta dị mfe na. Ulo kpụkọrọ akpụkọ nke ntụcha...
120W LED Nwa oge Ọrụ Light 5000K 15600Lm <Ọdịdị Pụrụ iche Durable> : Nke a bụ 120W eduzi ọrụ ọkụ ọkụ ọrụ dị ngwa na mfe ibufe ọrụ dị iche. Igodo mkpọchi kuki na n'elu maka nghọta dị mfe na. Ulo kpụkọrọ akpụkọ nke ntụcha na-agbakwunye...
ONYE ANYỊ NA-EME: Ihu igwe na-eguzogide ọgwụ na Led Work Light Tripod enwere ike iji ya ọbụna ebe kachasị mma. OKWỤKWỌ NDỊ AHỤRỤ ỤBỌDỤ: na-eru ihe karịrị ụkwụ atọ, ụyọkọ tripod na-eme ka ị hụ na ị nwere nsụgharị Tripod Ọrụ ọkụ ebe ị chọrọ ya...
Ọnụahịa otu: USD 46 - 49 / Piece/Pieces
Anyị 80w na- arụ ọrụ ntanetị 4,000 TRUST Luminen Brightness, 5,000K Agba Okpomọkụ. Mgbe ịchọrọ ìhè nke na-enwu enwu ịlele ọrụ ọzọ ị ga-arụ nke na-enye gị ohere ịhụ nkọwa zuru oke, jidere ihe na-emepụta Job Job Ọrụ na Ọdịdị Ụgbọ Mmiri. 9 ft eriri ike...
Ọnụahịa otu: USD 52 - 55 / Piece/Pieces
The Portable Light Guzosie jiri triangle nkwado, na -eme ihe na-ekpuchi ụkwụ, nkwonkwo dị elu ma na-eme ka nchekwa dị ọkụ. Telescopic imewe na-enye gị ohere ịgbanwe Led Tripod Light n'ime ebe ị chọrọ, ọ na-ejikwa T-shaped bar, ọ nwere ike ijide...
Ọnụahịa otu: USD 62 - 65 / Piece/Pieces
Obere ọrụ ọrụ anyị dị na 150W bụ 18000 lumens na 120lm / w. Ọrụ Ihie a na- arụ ọrụ zuru oke maka iji na ụlọ nkwakọba ihe, ebe ọrụ na ebe ndị ọzọ na-ewu. Bbier Led Working Light Stand is made from dies cast aluminum aluminum ụlọ na-echebe site na...
China Okpomiri Okpomiri Uhie Ngwa
Oru Izu Oru zuru oke maka ogbako ulo ma obu ulo oru. Na-arụ ọrụ na ụlọ ezumike 120-volt dị ugbu a. Akwụsị na-agbanwe site na mita 2 ruo mita isii n'ịdị elu. Ogwe nche nchebe, ígwè dị nro na mkpuchi uzuzu na-agbanye ntanye, na agba odo maka nchekwa.
Bbier kwadoro LED Ọrụ Light Tripod na 2 Ada ọkụ. Ọfụma na -arụ ọrụ na mmepụta na 2 elu wattage halogen bulbs. 150 Watt Kwesịrị Ekwesị Led Bulb pụtara mpempe akwụkwọ, ma guzosie ike ígwè. Ị nwere ike ịhazigharị nguzo ahụ ka ọ dị elu. Njirimara ndị a niile na-enye Led Work Light Tripod nke nwere atụmanya ndụ nke awa 50,000. Okpomiri Okpomiri Uhie na-enye ọkụ dị ukwuu na bọlbụ na-adịgide adịgide. Ozugbo e wepụrụ ya na njem ahụ, ọ na-ejidekwa aka ya na-enyekwa ya ohere iji nwayọọ na-ebugharị ya.
Led Ọrụ Light Tripod 150 Watt Kwesịrị Ekwesị Bb Bulb Ọfụma ọrụ Na-arụ ọrụ ìhè 130lm 120W Led Ọrụ Light